पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्जमा बन्दुकधारीको आक्रमण, ४ आतङ्कवादीसहित ६ जनाको मृत्यु
पुँजी बजार अन्तर्राष्ट्रिय समाचार
कारोबार भैरहेकै बेला पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्जमा बन्दुकधारीको आक्रमण, दुईको मृत्यु कैयन् घाइते
पाकिस्तानको पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार भइरहेकै समयमा आक्रमण भएको छ ।
पाकिस्तानको कराँचीस्थित सो स्टक एक्सचेन्जमा बन्दुकधारीको समूहले ग्रिनेड र बन्दुकले आक्रमण गर्दा कम्तीमा २ जना सर्वसाधारण र ४ जना आतंकवादी गरी ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने कैयन् व्यक्ति घाइते भएको बताइएको छ ।
स्टक एक्सचेन्जको मुख्य भवनको गेटमै ग्रिनेड आक्रमण गरेर बन्दुकधारीहरू भित्र पसेका थिए । उनीहरू पार्किङ एरियाबाट पसेर सबैमाथि गोली वर्षाएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् ।
प्रहरीका अनुसार स्टक एक्सचेन्जमा आक्रमण भएको खबर पाउनासाथ सुरक्षाकर्मी घटनास्थलमा पुगेको र जवाफी कारबाहीमा ४ जना आतंवादीको मृत्यु भएको छ ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार सोमबार बिहान १० बजे चारजना आतंकवादी आफ्नो गाडीबाट उत्रेर ग्रिनेड प्रहार गर्दै भवन भित्र प्रवेश गर्ने प्रयास गरेका थिए । भवनभित्र पसेपछि उनीहरुले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्न सुरु गरेका थिए ।
प्रहरीका सर्जन डा. करार अहमद अब्बसीका अनुसार हालसम्म ५ जनाको शव र प्रहरीसहित सात जना घाइतेलाई डा. रुथ पफाउ सिभिल अस्पतालमा ल्याइएको जानकारी दिए ।
गोलीबारी सुरु भएलगत्तै प्रहरी र रेन्जर टोली त्यहाँ पुगेर चार आतंककारीलाई मारेको सिन्ध रेन्जर्सले जानकारी दिएको छ । अहिले सो क्षेत्रलाई ‘क्लियर’ गर्ने प्रक्रिया भइरहेको उनीहरूले जनाएका छन् ।
पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्जका निर्देशक अबिद अलि हबिबले भने, ‘अप्रत्याशित र अकल्पनीय घटना भएको छ । उनीहरूले पार्किङ एरियाबाट भित्र पसी गोली चलाएका थिए ।’
कारोबारको ब्यस्त समयमा आक्रमण भएकाले त्यहाँ ठूलो त्रासदी फैलिएको र उनीहरू निकै हतास भएको निर्देशक हबिबले बताए । उनका अनुसार आक्रमणपछि भवनभित्र रहेका मानिसहरूलाई पछाडिको ढोकाबाट उद्धार गरिएको छ । एजेन्सी
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १५, २०७७, १३:१७:००